Isbaarooyin Hor leh oo lasoo dhigay Gobolka Shabeelaha Hoose & Maamulka gobolkaasi oo ka hadlay. – idalenews.com
Guddoomiye ku xigeenka Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose ee dowladda Soomaaliya Mudane C/fitaax Xaaji Cabdulle oo u warramay Idaacadda Shabelle ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in Maleeshiyaad ku labisan dareeska Ciidamada Dowladda ay wadada u dhaxeysa Afgooye iyo Wanlaweyn soo dhigteen Jid gooyooyin fara badan oo shacabka lagu dhubaateeyo.
Mudane C/fitaax Xaaji Cabdulle ayaa tilmaamay in mid kasta oo ka mid ah Isbaarooyinkaasi looga qaado gaadiidka lacagta 5 Isbaaro ay qaadan lahayd taas oo uu tibaaxay in aysan awoodin Gaadiidleydu.
Dhanka kale Guddoomiye ku xigeenka ayaa carabka ku dhuftay in ay soo ogaadeen in Jid gooyooyinkaasi ay ku lug leeyihiin Saraakiil iyo Guddoomiyayaal horay xil ka qaadis loogu sameeyay kuwaas oo uu sheegay in wax ka qabasho ay u baahan yihiin.
Si kastaba shalay ayey ahayd markii uu hakad ku yimid isku socodkii gaadiidkii ka shaqeyn jiray wadada u dhexeysa Degmooyinka Afgooye iyo Wanlaweyn kadib markii illaa 8 Jid gooyo oo hor leh la soo dhigay halkaasi.
Dhegeyso:-Bare Hiiraale oo sheegey in danjiraha IGAD u qaabilsan arimaha somaliya Maxamed Afey iyo Axmed madobe ey isku beel yihiin.